WAAYIHII WARSAME Q30AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q30AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q30AAD
Dhawr maalmood kadib Faaiso iyo Warsame si nabad ah ayay Nairobi ku gaareen. Idil oo wadata baabuur aabbeheed leeyahay ayaa boosteejada basaska ugu timid kadib na gaysay hoteelkii uu sannado ka hor Warsame degganaan jiray. Idil ayadu waxba kama oga hawsha Faaiso iyo Warsame war iyo wacaal u ma hayso in ay Xamar ka soo baxsadeen iyo sheekada Faaiso iyo Warsame isku keentay.
Markii ay hoteelkii tageen ayuu Warsame Idil u sheegay in Faaiso ninkeedi u imaan doono oo aysan u baahnayn qol kiro haddana Idil ayaa ku tiri “War gabadhu waa ay daallan tahay ee ninku goormuu imaanayaa?” Faaiso ayaa Idil waydiisay taleefankeeda si ay ninkeeda Yaasir u wacato. Idil inta nambarkii Faaiso ka yeersatay ayay wacday Yaasir markii uu dhacayna Faaiso u dhiibtay. Yaasir waxa uu u sheegay in uu hadda shaqo ku jiro oo uusan soo bixi karin ee galabta u imaan doono. Faaiso hoteelkii ayaa qol looga kireeyay simcard Safaricom ah na Idil ayaa uga soo qabatay dukaanka hoteelka ka soo horjeeda. Faaiso na inta ay taleefankii ay wadatay gashatay simcard-kii ayay wacatay habaryarteed oo magaalada ganacsi ku leh waxa ayna u sheegtay hoteelka ay joogto. Faaiso qolkeeda ayaa qado loogu geeyay halka Idil iyo Warsame fariisteen qaybta dumarka ee maqaayad ku taal qaybta hoose ee hoteelka. Warsame wali ma qubaysan waxaana ka muuqda bustii iyo boorkii basku la soo dhexjibaaxay, ma asagaaba waxaasi u muuqdaan waxa uu u hamuun qabaa aragga iyo agjoogga Idil’e. Idil qudheeda boholyowga ay Warsame u qabto darteed waxa ay hilmaantay in ay Islii joogto waxayna si dareen la’aan ah ayada iyo Warsame u dhexmareen tobanaan nin oo maqaayadda ka qadaynaya oo laga yaabo in qaarkood yaqaannaan. Marka ay galeen qaybta dumarka ee maqaayadda dhawr dumar ah ayaa fadhiyay oo Warsame si kulul indhaha ugu gubay ayaga diidaya ninka u soo xaluushay. Idil ayadu waxaas maba u jeeddo markii ay qabta dumadka galeen inta aysan fariisan inta ay Warsame ku soo boodday ayay hab siisay oo cabbaar laabta ku haysay. Dumar maamooyin u badan oo meesha fadhiyay mid ka mid ah ayaa inta xanaaqday damacday in ay Idil Warsame ku qayliso inta aysan hadlin mid kale oo dhinac fadhiday inta u soo dhawaatay dhagta ugu sheegtay “Waa wadaad romaantik ah maashaa Allah.” Garka wayn ee uusan Warsame labo gu’ jarin ayay Idil iyo Warsame ku baxsadeen. Ugu dambayn Idil iyo Warsame oo wajiyadooda ay raynrayni ka muuqato ayaa Warsame jaranjaradii hoteelka kor u fuulay Idil baabuurkeeda ku dhacday.
Faaiso waxa ay wacatay habaryeed Sareedo saacado kadib na ayada oo taksi wado ayay Faaiso u timid. Habo Sareedo ayaa waydiisay Faaiso “aaway Yaasir?”
Ii ma imaan wali ayay Faaiso ku jawaabtay. “Habo Sareedo oo wajigeeda caro dabooshay ayaa tiri oo sabab uu kuugu imaan waayay?” “Shaqo ayaan ku jiraa ayuu igu yiri,” “Naa bal na keen waa yaabe nin xaaskiisa oo Ilaahay u soo badbaadiyay aan wali u imaan,” ayay Sareedo tiri. Faaiso inta ay san hoteelka ka tagin waxa ay wacday Warsame balse ka ma uusan qaban oo waa uu gam’ay.
Faaiso waxa ay tagtay gurigii habaryarteed Sareedo oo ay kula kulantay qaraabadii oo dhan oo isugu timid si ay u soo salaamaan Faaiso oo Ilaahay soo badbaadiyay.
Faaiso waxa habaryarteed iyo qaraabadii kale ee u timid sidii ay Shabaab uga soo baxsatay iyo ninkii Shabaabku u guuriyeen uu soo badbaadiyay balse Faaiso waxa ay qarisay in ninkaasi Warsame ahaa ayada oo ilaalinaysa nabadgalyadiisa iyo magiciisa inta uu Kenya joogo. Waxa ay ka cabsatay in ninkeeda ama qof kale Warsame dacweeyo sidaas lagu xiro. Faaiso waxa ay sheegtay in wiilka la socday ay isku soo lugdarsadeen markii ay Muqdisho diyaaradda ka soo raacaysay.
Saaladdii maqrib markii la tukaday ayay Faaiso wacday Yaasir balse ka ma uusan qaban. Habeenkiina sidaas ayay Faaiso ku seexatay ayada oo xaajigeedi wali arag. Xattaa horay u ma aysan oo ayada oo Afgooye joogta iyo asaga oo Nairobi jooga ayaa la isu mehriyay sababtana waxaa lahaa Yaasir aabbibiis oo Faaiso adeerkeed labaad ah. Odayga ayaa mar uu Afgooye tagay Faaiso arkay kadib na wiilkiisa u doonay. Subaxdii dambe barqadii ayay Faaiso wacday Yaasir balse ma uusan ka qaban. Xooggaaa kadib ayado oo yaabban oo is leh maxaa ninka ku dhacay ayay heshay farriin qoraal ah oo Yaasir ka timid u na qornayd sidaan,
Subax wanaagsan Faaiso, sidee ku bariday? Salaan kadib waxa aan go’aansaday in aan ku fasoxo oo ku furo maadaama anigu aan gabarnimo kugu guursaday haddana aadan gabar ahayn oo nin kale aad la guri gashay. Sidaas darteed labo dalqadood ayaan kugu furay mid saddexaadna waan kuugu daray. Meherkaagi kunka doolar ahaana taleefanka habaryartaa Sareedo oo M-PESA leh ayaan kuugu diray maadaama uusan kaagu M-PESA lahayn.
Markhaatiyada furriinka waa
Cabdi Cali Maxamad iyo
Yuusuf Guuleed Xasan
Nolol wanaagsan ayaan kuu rajeeyay
Faaiso markii ay qoraalkii dhammaysay marna waa ay naxday marna waa ay yaabtay mar kale na ay faraxday.
Waxa ay ka naxday in ninkeedi ay ku hanwaynayd uu furo oo waxa ay noqotay naag la furay fadhi u ma yaal. Waa ay yaabtay oo waxa ay la yaabtay dhaqanka xumada Yaasir iyo sida uu dadnimada uga arradan yahay oo gabar marna xaaskiisi ah marna walaashiis ah oo Ilaahay cadow ka soo badbaadiyay uusan sidee tahay ku oran oran furo.
Waa ay faraxday oo waxa ay ku faraxday in uu Ilaahay jecel yahay oo uu horay Shabaab uga soo badbaadiyay haddana doqonkaas Yaasir ah uusan xilo uga dhigin.
Faaiso inta ay habaryarteed Sareedo qolka ugu gashay ayay waydiisay in lacag taleefankeeda ku soo dhacday iyo in kale. Sareedo taleefankii ayay fiirisay mise kun doolar baa ku soo dhacday oo Yaasir ka timid. Sareedo oo warmoog ah ku tiri maasha Allaah kun doolar baa ninkaagi in aad maanta suuqa uga soo adeegtid kuugu soo diray illaa aroos baad isu diyaarinaysaaye. Faaiso ayaa tafeelankeedi Sareedo u dhiibtay oo ku tiri akhri farriinta. Sareedo markii ay dhammaysay ayay inta sarejoogsatay tiri “yaah! Yaah! Naa ma ka dhabbaa dhub Alle ha siiyee?” Faaiso u ma jawaabin. Sareedo cabbaar markii ay qaylqalisay oo guriga dhex gaardisay ayay inta degtay tiri “Habayaryar ha u bixin kaas Ilaahay baa ku mootiyay doqon aan kuu qalmin oo aabbahaa kaa iibsaday buu ahaa oo xoogaa lacag ah ku dhaafsaday”.
Faaiso gurigii habaryarteed ayay muddo sannad ah ku noolayd waxa ayna muddadaas wax ka baranaysay iskoollada Nairobi ugu dambaynna dalka Kanada ayay u dhooftay. Faaiso intii ay Nairobi joogtay Warsame waxa ay iska la xiriiri jireen taleefanka ama khadka internetka.
La soco qaybaha kale haddii Eebbe idmo